Maxaad sameyneysaa marka hemp uu kululeeyo? Heerarka THC iyo ganacsigaaga
Waxa la sameeyo marka hemp tijaabiyo kuleylka
Waa maxay Hemp kulul?
Watch Qareenka Wershadaha Cannabis, Tom, u sharax waxa la sameeyo marka hemp tijaabiso kuleylka heerkiisa 'delta-9 THC'.
Wac ku saabsan tijaabada hemp-kaaga kulul
Raadinta Macluumaadka Ganacsiga ee Hemp - Riix Halkan.
"Hemp kulul" micnaheedu waa hemp heerarkiisa 'delta-9 THC' ay dhaafeen marinka 0.3% ay dejiyeen sharciga gobolka iyo federaalka. Badanaa qawaaniinta gobolka waxay oggol yihiin xad-dhaaf xad-dhaaf ah, xad-dhaaf, iyo ka-ilaalin beerista hemp ee tijaabisa kuleylka heerarkooda THC. Jahwareer badan ayaa ka jira qaababka tijaabada ah oo udhaxeeya xaddiga hoose ee udhaxeeya delta-9 THC marka loo eego tetrahydrocannabinolic acid (THCa) oo sababa dhibaatooyin la xiriira tijaabinta dalagyada hemp si loo waafajiyo qeexida heerka hemp warshadaha - taas oo ah xashiishadda loo yaqaan 'THC bred' ka soo baxa, ama ugu yaraan 99.7% ka ah. Ku barbaaridda abuur marka loo eego isbadalada ama dhaqamada unug waxay kor u qaadeysaa halista “hemp kulul.” Jiilka nooca F, F1 marka loo eego F5 tusaale ahaan, sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa xasilloonida hidde-wadaha hepat's THC.
sida looga fogaado hemp kulul
ku iibsato heshiis qoraal ah
adeegso farcan hemp la aqoonsan yahay
u koraan hemp si la mid ah tii ay koray markii la caddeeyay
iska ilaali in aad ku dhibeysid dhirta
tijaabi inta lagu gudajiro HPLC
si taxaddar leh u ilaali hemp si uu u bislaado
u hogaansanaanta shuruudaha ka warbixinta soo goynta gobolkaaga
haddii tijaabada kulul ay noqoto mid dhexdhexaad ah haddii ay suurtagal tahay haddana mar labaad tijaabi
wac qareenkaaga haddii dhib yimaado garaacid
Talooyin Ku Saabsan Hemp Taasi Tijaabiso Kuleylka
Dad badan oo beeroley ah ayaa la kulma xaqiiqada markay timaado tijaabada hemp. Maskaxda dhiiggoodu wuu kululaadaa marrarka badankood, taasna waa marka saraakiisha ay meesha yimaadaan. Si looga fogaado xaaladdan, waa inaad ogaataa waxa la sameeyo marka hemp-ku uu kululaado. Waa kuwan jawaabaha.
Waa maxay Shuruucda Rasmiga ah
Gobollada badankood, xadka rasmiga ah ee Heerarka THC ee hemp waa 0.3%. Tani waxay ka dhigan tahay in hemp-taadu ay lahaato boqolkiiba inta saxda ah ama qadar yar oo ah THC. Tijaabinta waxaa lagu sameeyaa habab kala duwan, laakiin badankood waxay cabbiraan heerka qaybaha ka kooban hemp. Kala soocidda cannabinoids, terpenoids, iyo flavonoids ayaa ah habka ugu caansan ee loo go'aamiyo haddii hemp leeyahay qaybinta qayb ku filan.
Cabbirid cabirradan waxay saameyn ku yeelan karaan dhismaha hemp. Tani waa markii dhibaatooyinku dhacaan. Haddii baaritaanka aanuu ku filneyn, hemp-tu waxay muujin kartaa heerar sare ee THC, oo kaa dhigaya meel aad caawimaad weydiisan karto. Qareenada badankood way kaa caawin karaan xalinta dhibaatadan sababta oo ah tijaabadu waxay wax ka badali kartaa heerarka guud ee heerarka 'HEC'. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo habab tijaabo rasmi ah oo ku siinaya badbaado buuxda markay timaado heerarka THC ee hemp-kaaga ah.
Beeraleyda ku dhaqan daafaha dalka waxay leeyihiin abuur badan oo kala duwan beero kasta oo la beero waxay noqon kartaa mid adag. Waqtiga intiisa badan, abuurka cusub ee ciidda la galiyay ayaa wareejinaya kiimikooyin badan oo iyagu dabiici ahaan heerkoodu sarreeyo ayuu ka sarreeyaa THC. Tani waxay si gaar ah u muuqata sanadka koowaad ee wax soo saarka.
Inuu u hogaansamo xeerarka, Beeraleydu waa inay adeegsadaan abuurka la xaqiijiyay markay tahay tijaabada THC. Isla mar ahaantaana, waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan dariiqooyinka goosashada ee kordhin kara ama yareyn kara natiijada baarista THC.
Markaad dhammaystirto nidaamka xakamaynta, hemp aan “aamin aheyn” isticmaal waa in la baabi'iyaa, taas oo ah dhibaato aad u weyn beeraleyda oo lacag badan ku maalgelisay kobaca guud. Waa inay ka saaraan dhammaan miraha isla markaana ay bilaabaan xilliga soo socda.
Ahaanshaha warshadaha hemp waxay ku siineysaa fursado badan oo aad ku sahmiso suuqa. Mararka qaar, hemp wuxuu tijaabin karaa kuleylka laakiin hemp-ka waxaa loo adeegsan karaa badeecooyin kala duwan. Haddii aad leedahay sharci sharciyeed si aad ugu korayso hemp isticmaalka madaddaalada, markaa waxaad lahaan kartaa hemp oo kulul.
Dhanka kale, haddii abuurkaaga lagu xuso in loo isticmaalo ujeedooyin caafimaad, ma ciyaari kartid. Xaaladdan oo kale, heerarka THC waa inay ahaadaan kuwo sax ah. Habka ugu fiican ee lagu ilaaliyo heerka meel aamin ah waa in lala socdo tilaabo kasta oo koritaan ah.
Waxa la Sameeyo Haddii Hemp Tijaabadaadu ay kulushaato
Haddii cagaarshowgaagu tijaabiyo, waxaad haysataa xalal kala duwan. Midkood waa in la helo ra'yi labaad marka ay timaado imtixaanka. Waxaad u diri kartaa hemp tijaabooyin dheeri ah oo baari doona waxyaabaha ka kooban THC. Haddii baaritaanka labaad uu muujiyo natiijooyin isku mid ah, hemp-kaagu wuxuu xaqiiqdii leeyahay heerar sare oo THC ah.
Waxa kale oo la sameeyo haddii cagaarshowgaagu uu kululaado ayaa la xiriiraya iibiyahaaga abuur. Inta badan iibiyayaashu waxay mas'uul ka yihiin tayada abuurka, oo waa inaysan u oggolaan inay ka iibiyaan beeralleyda abuurka aan habooneyn. Hadday saas sameeyaan, way jabinayaan sharciga, oo waad bilaabi kartaa kiiska. Iibiyeyaasha shinnidu waa inay u hoggaansamaan shuruucda rasmiga ah markay tahay qadarka, qaabka, iyo kala-soocidda abuurka. Waa inay kuu soo sheegaan sifooyinka abuur aad ka iibsanayso iyaga.
Haddii aad qandaraas qandaraas kala leedahay iibiyaha, waxaa wanaagsan inaad si buuxda u akhrido oo aad baartid waxyaabaha ku jira. Xeerarka iyo qawaaniinta ayaa si adag loo qeexay mana jiraan meel banaan oo lagu soo bandhigo. Haddii heshiiska ku jiro inuu abuurku si sax ah u koray oo si ku filan loogu beero, markaa waxaad xaq u leedahay inaad ogaatid sida hemp uu u gaari karo heerarka la mamnuucay ee THC.
Xalka ugu fiican ee aad sameyn karto haddii cagaarshowgaagu isku kululeeyo ayaa wacaya qareenkaaga. U wac qareenka wax ku soo bartay maadadan, si isaga ama iyada ay u fidiyaan taageerada saxda ah. Koraysa hemp waa geedi socod adag isla markaana xeerarku door muhiim ah ayey leeyihiin. Qareenkaaga waa in lagu soo bandhigaa kiiska, qaasatan haddii aad u maleynaysid inaad ku dhaawacantay nidaamka.
Marka hemp-kaagu kululeeyo, xalka ugu fiican ayaa ah in la burburiyo hemp. Burburku wuxuu noqon karaa mid adag maxaa yeelay waxaad maal gelisay lacag iyo waqti badan. Si kastaba ha noqotee, waa habka kaliya ee looga saarayo hemp oo aan ku filneyn oo xoogga saarta hemp ku habboon xeerarka.
Markaad burburinayso hemp, hubi inaad raad raad lahayn. Meelaha hemp aan ku filneyn, carradu waxay dhowraysaa astaamaha hemp iyo dhammaan miraha mustaqbalka ayaa dhaxli kara astaamaha hemp hore. Sababtaas awgeed, waxaa muhiim ah in gabi ahaanba la nadiifiyo aagga.
Waqtiyada cagaarshowgaagu isku kululeeyo, waxaa ugufiican inaad heshid taageerada saraakiisha sharciyeynta. Haddii ay helayaan abuurka ka sarreeya heerka THC, waxay kugu ganaaxi karaan dhaqaale ahaan. Beeraleyda badankood waxay helaan ganaax aad u hooseeya, gaar ahaan haddii heerarka THC aysan aad u badneyn. Dhanka kale, beeraleyda aan quseyn cabirka askarta markay tahay burburka hemp waxay la kulmi karaan dhibaatooyin sharci oo weyn.
Waxa la Sameeyo Si Looga Badbaado Hemp
Si looga fogaado dhibaatooyinka, waxaa ugu wanaagsan in si taxaddar leh loo doorto abuur hemp. Abuurka qaar waxay leeyihiin koror aad u weyn heerarka THC, gaar ahaan goosashada ka dib. Sababtaas awgeed, waxaa xikmad badan inaad ku dhejiso abuurka la xaqiijiyay oo la tijaabiyay ee raacaya qawaaniinta.
Lahaanshaha heerarka heerarka sare ee THC labadaba waa khatar waxayna saameyn ku leedahay ganacsigaaga. Bixinta waqti dheeri ah si looga hortago dhibaatooyinka ayaa aad uga fiican la tacaalida dhibaatooyinka sharciga.
Tusaalahaas, isticmaal miraha saxda ah oo mari habka saxda ah ee koritaanka iyo goosashada. Natiijo ahaan, hemp-kaagu ma tijaabi doono kuleyl waxaadna helaysaa fursado badan oo aad ugaga iibiso hemp iibiyaasha badan. Marka hemp-kaagu kululeeyo, isticmaal dhammaan awooda qareenada iyo xeerarka si aad u xalliso arrinta. Sidan ayaad ku xaqiijin kartaa inaad nabad ku sugan tahay hawsha.
waxa la sameeyo marka hemp-kaagu uu kululaado
Sidaa darteed kama fileynaysid in dalaggaaga lacagta ahi inuu noqdo marijuana sharci darro ah - taasi waa hagaag, shuruucda badankood waxay u oggolaadaan beerista dayac-darrada hemp kulul. Laakiin intaanan sidan u sii wadin - xusuusnow tani waa macluumaad oo ma ahan talo sharci, si aad ugu dhufato sida haddii aad ku raaxeyso nuxurka oo aad u qorto wararka sharciyeynta daroogada cannabis.
Ku dheji ilaa dhamaadka illaa iyo waxaan kuu sheegi doonaa sida ugu wanaagsan ee looga takhalusi karo beerta hemp halista hemp this kulul.
Tilmaam: sida ugu wanaagsan ee looga xayiro hemp kulul waa heshiis iibsi qoraal ah
Marka hore hubi in baaristaadu ka timaado shaybaadhka tijaabada ah oo aan ahayn isugeyn-THC, laakiin delta-9 THC - kani waa kiimikada sixirka ah ee kuu sheegaysa inaad qabto hemp ama marijuana. Tijaabadu waa in aan lagu sameynin gaaska 'Gas Chromatography' - laakiin cadaadiska chromatography cadaadiska sareeya, laga yaabee in lagu daawado tiro badan - LC-MS muddo gaaban. Xitaa haddii aad aamminsan tahay natiijada sheybaarka - mar labaad tijaabi dalagga - laga yaabee inay taasi ahayd dhammaan fuuq-bax iyo ra'yi labaad waxay tusi doonaan wax gabi ahaanba ka duwan - hiddo-wadaha hemp aan isku mid ahayn, gaar ahaan marka ay ka soo kordhayaan abuurka.
Intaa waxaa dheer, dalagga hemp ee sanadka 2019 ee gobolka ayaa ka qarxay qiyaastii 50,000 acres sanadka 2018 ilaa 200,000 in ka badan sanadka 2019. Baahida loo qabo abuurka hemp waxay u badan tahay inay arkeen miraha qaar oo la iibiyay kuwaasoo aan u dhigmin xayeysiistooda oo aan u ekayn mid dheddig ah ama aad ugu hooseeya THC sida ay ahaan laheyd sannado badan oo dheeri ah oo ay kujirto hiddo-wadaha.
Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, waa inaad u jeesataa heshiiska iibsashada abuurkiisa hemp ka dib marka aad hesho fikradda labaad - tani waa inay kuu sheegtaa waxa uu iibiyaha abuurku ku baahiyey - heerarka THC laga filayo iyo boqolleyda farcankii dumarka - waa inay sidoo kale bixiso waxa loogu yeero ka hooseeya Nidaamka Ganacsiga Midaysan (UCC) oo ah mid aan waafaqsanayn alaabada. Waxay noqon kartaa jebinta heshiis kaas oo u ogolaanaya iibsadaha qaar ka mid ah dawooyinka.
Waa maxay waxa aad dhahdo - ma aadan heshiis qoraal ah la gelin iibiyahaaga farriinta oo waxaad ku qodday noloshaada kaydinta nolosha oo dhan kor u kaca hemp-kaan warqad la'aan. Hagaag, qareenada ayaa wax badan ka caawin kara markay tahay hirgalinta xuquuqaha qandaraaska - laakiin waqti uma socon karno. Haddii uusan jirin heshiis qoraal ah, qodobada caadiga ah ee UCC ayaa bixin doona faahfaahinno gaar ah waxqabadka qandaraaskaaga. Fadlan isticmaal heshiis qoraal ah marka aad iibsanayso abuurka hemp mustaqbalka - kani waa galbeedka bahalnimada ah, sidaa darteed ka taxaddar markaad ganacsi sameyneyso.
Markaa kadib markaad dalbato fikrad labaad, oo aad hesho koobi ah heshiiska iibsiga farcankaaga, wac qareenkaaga si aad u aragto waxa ay ka maleeyaan.
Waa maxay taasi - ma lihid qareen maxaa yeelay waad akhrin kartaa sidoo kale, miyaanad ahayn ninka sidoo kale aanuu lahayn heshiis qoraal ah - hagaag, taasi waa hagaagsan tahay - Maalin ayaad gashay cadaab - maya Dareenkeyga Faraha ayaan kuu ruxayaa adiga oo aan daboolin gadaashaada ka hor intaadan ganacsi yeysan.
La tasho garyaqaan hemp - taas macnaheedu waa waxaan u jeedaa garyaqaan khibrad ganacsi u leh dhaqangelinta qandaraasyada - waxaanan rajeynayaa xoogaa khibrad beereed ama hemp ah si ay u qaddarin karaan waxyaabaha ka jira warshadaha.
Qareenkaaga ayaa kaa caawin doona inaad kaxeysato kaliya shuruucda gobolkaaga - ama Xeerarka Federaalka haddii gobolkaagu ku daro barnaamijkooda hemp - laakiin sidoo kale qawaaniinta iyo qawaaniinta dalaggaaga hemp - oo sida muuqata u fidiya hemp kulul taas oo ah si aan xaq ahayn u koray.
Immisa jeer ayuu hemp ku yaal Mareykanka?
Dhinac ahaan waxaan u maleynayaa in 2019 ay noqon karto sanadka ugu dalaga badan ee marijuana koray Mareykanka - laakiin taasi waa sababta oo ah in hektar badan oo dalagyada hemp ah ay u badan tahay inay tijaabi doonaan kuleyl sababta oo ah sida cusub ee warshadaha hemp.
Marka xigta, waa waqtigii lala xiriiri lahaa iibiyahaaga abuur. Ganacsigu ma jecla qareennada sida qofka ku xiga - markaa ha ku bilaabin warqad codsi ah oo hanjabaad ah. Sida ugu habboon, waxaad durba gelisay qodobada saxda ah qandaraaska iibinta abuur hemp haddii ay sidan oo kale dhacdo. Waxaad ka hortageysaa hiddo-wadayaasha - waxyaabo uun baa mararka qaarkood boodaa marka abuur ay ku lug leeyihiin. Haddii aad sidoo kale kula macaamileyso heshiis qoraal la'aan ah, waxaan rajeyneyaa shirkadda shirkada aad ka soo iibsatey inay fiicantahay waxayna kaa caawin doontaa inaad soo ceshato kharashaadka kaa luma - bedelkii aad ku qori lahayd qoraallo dib u eegis xumo iyo qoraalo ay ku qoreen barahooda bulshada. Haddii arrimuhu xumaadaan, qareennadu ma ahan waxa ugu wanaagsan ee la sameeyo.
Waxaad aragtaa waxyeeladaada waxaa ka mid ah faa'iidooyinka lumay - laakiin taasi runtii waa mid la qiyaasi karo oo ah warshado cusub - oo aan suurtagal ahayn in la caddeeyo, laakiin kharashaadka adag sida mirahaaga iyo nafaqadaada, shaqadaada - kuwan ayaa ah kuwo si sahlan waxyeelo loogu geysan karo taasoo macquul ah in la soo kabsado.
Ka dib markaad isku daydo inaad daboosho saldhigyadaada oo aad ku xaqiijiso hemp kuleylka leh ra'yi 2aad. Markaa waa inaad u hogaansanto qawaaniinta gobolkaaga si aad u ilaaliso naftaada inaad tahay soo-saare dayac - xusuusnow .3% ee delta-9 THC waa xadka u dhexeeya hemp iyo marijuana - sida ku cad sharciga federaalka ugu yaraan.
Marka xadkaas udhaxeeya dayaca iyo ujeedka ayaa ah xariiq hadii aad gudubto - waxaad qatar galinaysaa masuuliyada dambi - oo ay tahay inaadan sameynin sababta oo ah cabirka hemp wuxuu kordhayaa in culeysku yahay dambiyo aad u culus - xitaa dowladaha sharciga maxaa yeelay waxay ubaahanyihiin rukhsado aadan haysan. . Marka ha iska iloobin marka aad hubto in hemp aad u kulul - waa inaad raacdaa sharciga oo aad ilaalisaa…. Butt.
Markaa taa macnaheedu waa inaad burburin doontid hermp - oo ma kori kartid farcankaas sanadka soo socda maxaa yeelay dowlado badan ayaa kaa doonaya inaad heysato iimaan wanaagsan, ama caddeynta abuur, dammaanad ka qaadista waxa aad kortay waxay noqon doontaa warshad hemp oo aan marijuana ahayn. Gobollada ayaa xad u leh inta sano ee aad si taxaddar leh ugu kori karto marijuana una malaynayso inay tahay ciribtir kahor intaadan halis u galin liisankaaga.
Soo ogow waxa gobolkaagu u baahan yahay inuu burburiyo, ama badbaadiyo waxa hemp ee aad awoodid.
Waxaa suuragal ah inaad ka gooyo burooyinka cagaarka ah hadaad gobalku kuu ogolaado inaad isku daydid oo aad ku iibiso fiber - laakiin geedaha gabi ahaanba way ka duwan yihiin sidaas daraadeed waxaa laga yaabaa inaad nasiib u yeelato. Mar labaad, liisankaaga si aad u beero hemp ayaa ka muhiimsan hal dalag oo kulul oo kulul - markaa raac sharciga oo ogow in tani tahay galbeedka duurjoogta ah iyo warshado aad u da 'yar oo u baahan inay ku bislaadaan oo u isticmaalaan dekadaas aaminka ah si ay ganacsigaaga u sii wadaan xilli kale.
Dacwada Hemp ayaa ku Socota Kulul
Ugu dambeyntiina, waxaad la xallili doontaan iibiyaha abuurka haddii ay runtii khaladkooda ahayd in dalaggaagu kulul yahay. Jinsiyadaha loogu talagalay CBD iyo THC waa mid xeeladaysan - abuurka qaar oo hal xaalad ah ayaa si kala duwan ugu koray - midda Illinois, Cherry Wine waxay ahayd abuur aad u deggan - laakiin tani waa wershado ku saabsan abuurista hiddo-wadayaal cusub, abuur cusub - mana garanayno waxa soo socda.
Iyo sababta oo ah waxaan joognaa qarka u dhiig baxa tikniyoolajiyada cannabis - aan dib u dhigno - laakiin marka hore like & isdiiwaangir haddii aad tan u jeclaatay - sababta oo ah waxaad heli doontaa ogeysiisyo sharciyeynta xashiishadda cannabis - maalin walba oo jimce ah.
Si loo gabagabeeyo: haddii hemp's delta-9 THC heerka uu ka sarreeyo 0.3%, shatigaagu wuxuu u baahan yahay ficillo gaar ah.
Waa tan waxa la sameeyo haddii aad dalagyada hemp waxay kulushahay THC.
Ka hel fikrad labaad hemp-kaaga heerarka THC
Hubi shuruudaha qandaraasyada iibsashada hemp-kaaga
Wac qareenkaaga xashiishad
Dib u eeg waxa sharciga iyo qawaaniintu ka odhanayaan hemp oo leh heerarka sare ee THC
La xiriir iibiyahaaga farriinta wixii ku saabsan dhibaatada hemp-ka heerarka 'HEC'
U hogaansanaanta qawaaniinta ku siineysa marin aamin ah oo ka soo horjeedda hemp kulul oo dayacan.
Burbur hemp, ama badbaadi wixii aad kari karto
Qeex dacwadda, ama geli heshiiska dejinta haddii iibiyaha farcanku mas'uul ka yahay khasaaraha.